2 KWABASETESALONIKA 1 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
2 KWABASETESALONIKA 12 KWABASET ... 1
11Kubhala mna Pawulos, ndikunye noSilas noTimoti. Ndibhalela ibandla likaThixo wethu elimanywe neNkosi uYesu Krestu eliseTesalonika.Mseb 17:1 2Ndithi: Wanga uThixo uYise neNkosi uYesu Krestu anganenzela isisa, aniphe uxolo.
Umgwebo xa kufika uKrestu
3Kufanelekile ukuba simbulele uThixo ngawo onke amaxesha ngenxa yenu, mawethu. Ewe, kulunge kanye ukuba simbulele ngenxa yokuba ukholo lwenu luya lusanda ngokwanda. Yaye nokuthandana kwenu kuya kukhula ngakumbi nangakumbi. 4Yiyo loo nto ke nilibhongo lethu esihamba siqhayisa ngalo kwamanye amabandla kaThixo. Kaloku nina ninomonde, nimi ngxishi elukholweni naphantsi kweentshutshiso enikuzo, kwakunye neenzingo enizithweleyo.
5Yonke ke loo nto ibonakalisa ukuba uThixo ugweba kakuhle. Kaloku ngenxa yezi nkxwaleko nizithweleyo uThixo uya kunenza nikufanele ukulawulwa nguye. 6Kulunge kanye ukuba uThixo asiphindezelele, abavise iinzingo abo banicinezelayo, 7aze kuni nina nitsala nzima, nakuthi, enze kube hele, kube chosi. Loo nto woyenza mhla ifika iNkosi yethu uYesu Krestu, ivela emazulwini, ingqongwe zizithunywa zayo ezinamandla, 8nangamadangatye omlilo. Abo bangamvumiyo uThixo yobagweba, kwanabo bangazithobeliyo iindaba ezimnandi zeNkosi yethu uYesu. 9Baya kohlwaywa ngentshabalalo yangonaphakade, basuswe phambi kweNkosi, basikwe kubuncwane bewonga layo. 10Kaloku ngaloo mini iya kuba ize kunikwa imbeko ngabayo, bayinqule bonke abakholwayo. Iya kuba njalo ke nakuni, kuba nani nakholwa ludaba endaniphathela lona.
11Yiyo ke le nto ndihlala ndinithandazela. Ndisoloko ndimcela uThixo ukuba anifanelise ubizo lwenu. Wanga anganipha amandla okunqwenela ukwenza okulungileyo, anigqibezelele umsebenzi eniwenze niqhutywa lukholo. 12Ngamana ke ningalidumisa igama leNkosi yethu uYesu, nani niwongwe ngobabalo lukaThixo wethu neNkosi uYesu Krestu.